CDMA ( Code Division Multiple Access ) ရဲ. သမိုင်းကြောင်း - ÄÑÐRÖÏÐ PÄLÄCE
CDMA ( Code Division Multiple Access ) ရဲ. သမိုင်းကြောင်း
wai phyo | 1:56 PM | Mobile News
အနှစ် ၇၀ ကြာပြီးနောက် ဒါဟာ ရွှေရောင်ပိတ်ကားပြင်ထက်က စူပါစတားတစ်ဦးနဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်တဲ့ တေးရေးဆရာတစ်ဦးတို့ဟာ ဒီနေ့ ဆက်သွယ်ရေးစံနစ်ရဲ့မျက်နှာစာက နည်းပညာ တစ်ခုကို ဘယ်လိုတီထွင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
blog တင်ဖို. မရဲသေးလို. ဖတ်ထားတာလေ Share ပေးတာပါ